Apple Music waxay sheegtaa inay bixiso dinaar halkii taran kasto oo loogu talagalay farshaxanka | Wararka IPhone
Apple Music waxay sheegaysaa inay bixiso dinaar halkii taran kasto oo loogu talagalay farshaxanka
Angel Gonzalez | 18/04/2021 18:00 | Apple Music, Noticias
Spotify iyo Apple Music ayaa ugu sareysa adeegyada muusikada qulqulka. Inkasta oo saldhigga dhageysiga uu ku sii kordhayo Apple Music, Spotify wali waa boqor. Iyadoo in ka badan 150 milyan oo isticmaale isticmaale ah iyo in ka badan 250 milyan oo adeegsadeyaal ah oo hoos imanaya dhageysiga xayeysiinta, waxay u horseedaa suuq sii kordheysa oo tartan ah kaasoo farshaxan-yahannadu waxay dalbanayaan muhiimad dheeri ah oo dhaqaale. War-saxaafadeed ay Apple Music u dirtay farshaxanada, soo saarayaasha iyo shirkadaha rikoodhada, habka lacag bixinta ee adeegga ayaa lagu xaqiijiyay waxaana soo baxday in Big Apple waxay bixisaa boqolkiiba hal doolar soo saar kasta oo la sameeyo.
Apple waxay bixisaa hal dinaar halkii dhageysi, waa labanlaab waxa Spotify ay bixiso
La note by Apple Music wuxuu ku dhashay dhowr sababood. Marka hore, iyada oo laga jawaabayo mid ay daabacday shirkadda 'Spotify' toddobaadyo ka hor halkaas oo ay ku sharraxday sida ay adeegyadeeda ugu abaalgudday fannaaniinta. Ta labaad, in la sii wado in la ilaaliyo daahfurnaan caafimaad leh oo udhaxeysa Apple Music iyo fanaaniinta, howl muhiim ah oo ka socota Cupertino oo dhowr jeer carabka ku adkeeyay inay aad muhiim ugu tahay iyaga. Iyo, ugu dambeyntii, in la isku dayo in la soo jiito wadajirka farshaxanka si aad iyo aad loogu maalgeliyo waxyaabo gaar ah oo ku saabsan adeegga qulqulka muusikada ee Apple.
IOS 14.5 waxay keeneysaa liiska muusikada ee ka badan 100 magaalo ee Apple Music
Hal dinaar dhageysi kasta waa waxa Apple Music ay siiso fannaanka. Si kastaba ha noqotee, ma aha in lacagta badankeedu ay ku dhacdo farshaxanka laftiisa, laakiin waxaa jira dhexdhexaadiyeyaal: shirkadda diiwaanka, daabacayaasha, xayeysiiyaasha, iwm. Haddii aan isbarbar dhig ku sameyno sida ay Spotify u bixiso waxaan arkeynaa in ay ku dhowdahay laban laab tan iyo markii ay Spotify bixiso inta udhaxeysa seddex meelood meel iyo bar doollar dhageysi kasta. Si kastaba ha noqotee, natiijada ugu dambeysa ayaa ah in Spotify ay ka soo saarto dakhli aad u fara badan saldhigga isticmaale ee firfircoon ee ay leedahay.
Ugu dambeyntii, waa inaan sidoo kale iftiiminaa asalka lacag bixinta ee Apple Music Taasi waxay si toos ah uga timaaddaa bixinta rukunka isticmaalayaasha. Halka shirkadda Spotify ay leedahay qayb weyn oo xayeysiiyayaal ah oo iyagu lacag bixiya si ay ugu muuqdaan xayeysiis in ka badan 250 milyan oo isticmaale oo aan bixin adeegga Premium.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Music » Apple Music waxay sheegaysaa inay bixiso dinaar halkii taran kasto oo loogu talagalay farshaxanka
120Hz wuxuu mar kale soo bandhigayaa warar xan ah oo ku saabsan iPhone-ka soo socda
Dhamaan wararka Apple ay ku soo bandhigi doonto munaasabaddeeda